Varun Dhawan oo isha ku haya in shaqo aan filim-jilista aheyn uu ka qabto Bollywood, xitaa afkiisa ayuu ka qirtay! | Filimside
Home Nolosha Jilayaasha Varun Dhawan oo isha ku haya in shaqo aan filim-jilista aheyn uu...
Shan sanno ka hor ayey aheyd markii uu jillaaga fudfudud Varun Dhawan kusoo biiray shirkadda aflaanta Bollywood markaasoo uu kusoo caan baxay filimkii Student of the Year ee Director Karan Johar.
Wixii intaas ka dmabeeyey Varun Dhawan hawadaas ayuu galay wuxuuna sameeyey aflaan ganacsi ahaan guuleystay. Balse Varun wuxuu kasoo jeedaa qoys caan ku ah filimsameynta, waxaa aabe u ah David Dhawan oo ah Director caan ah, halka walaalkiis uu yahay Rohit Dhawan kaasoo isna filimsameeye ah.
Varun Dhawan ayaana haatan daaha ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu noqdo filimsameeye oo uu wax ka maamulo kaamirada gadaasheeda, bedelkii uu mustaqbalkiisa oo dhan ku qarash gareyn lahaa kaamirada horteeda.
Isagoo saxaafadda la hadlayey Varun wuxuu yiri: “Ma garanayo xilliga ay noqon doonto, balse waxaan ku fikirayaa inaan filimsameeye noqdo. Maantase fursaddaasi iima furna, balse waxaa laga yaabaa inaan helo fursad aan kaga shaqeysto kaamirada gadaasheeda”.
Varun filimkiisa xigga wuxuu noqon doonaa ABCD qaybtiisa sadexaad – kaasoo la daawan doono 8 bisha november ee sannadkan 2019
Previous articleWaa kuwee atoore iyo filim sameeyaha ugu guulaha badan 30-sano ugu dambeesay
Next articleDaawo: Ram Charan iyo xaaskiisa oo Tanzania ku sugan Atirisho camilayad isku sameesay oo lagu camirtay!